health care reform act bill text: manfaat temulawak cream
Posted on Thursday, March 13, 2014 by Lisa Fernandez
manfaat temulawak cream Uru temulawak a maara nke ọma ebe ọ bụ na 4000 ka afọ gara aga, otú ahụ anaghị adị anya ugbu a, ọtụtụ ndị na ngwaahịa mere Nsukka na-eji ngwaọrụ temulawak . Nke a na osisi nwere n'asụsụ Latịn aha curcumma xanthorrhiza ọ bụla district nwere aha ma ọ bụ okwu ndị dị iche iche . Dị ka e kwuru na Madura district temulabak , koneng n'ike mmụọ nsọ n'ihi na Sunda mpaghara, ma e nwekwara aha a na-akpa ọchị N'ajụjụ ọnụ na-acha ọcha aha ya.
Ntak emi temulawak mma gwọọ dị iche iche ike ọrịa ? Nke a bụ n'ihi na ọdịnaya ndị temulawak . Ke temulawak e nwere ọtụtụ chemical ogige ndị dị otú ahụ dị ka mmanụ ikusi ma ọ bụ ọtụtụ ndị na- ezo aka fellandrean na turmerol , dị oké mkpa mmanụ , kamfer , glucoside , foluymetik karbinol . Ntre nso ke temulawak nri nke ahu ike ? Ka malitere , gee ntị kpamkpam zuru nyochaa n'okpuru ebe a.
Iji merie digestive ọrịa
Ụfọdụ digestive ọrịa ndị dị otú ahụ dị ka flatulence , dyspepsia , na a pụrụ imeri ihe na-eji temulawak indisgestion . I nwere ike na-erepịaghị temulawak mgbe niile iji jirichaa utịp.
Iji nyere aka ebelata mbufụt
Mbufụt ndị dị otú ahụ dị ka osteoarthritis anyị nwere ike isi merie nso -eji temulawak nke a eke herbal Efrata si agwa .
Ike imeri cancer
N'Ubi temulawak nwere ike ịgwọ dịgasị iche iche nke ọrịa cancer ndị dị otú ahụ dị ka colon na prostate cancer . Dị ka e dere, m.vemale.com , temulawak ike inhibit mmepe nke prostate cancer . Ọ bụ hypothesized na -arụ ọrụ temulawak menyuplai kwụsị ọbara na arịa ibu ke kansa.
Dịkwuo agụụ na ụmụaka, ọrịa splin , akụrụ mgbu, ala azụ mgbu , ụkwara ume ọkụ , isi ọwụwa, oyi , nrekasi obi , afo mgbu, rụọ ọrụ mmepụta ASI , imeri afọ ntachi , ihe mgbu cangkrang , chikinpoksi , na-emeso canker sores na otutu.
Ọ bụ ezie na i nwere ike ịgwọ ọrịa dị iche iche , kama ọ na-aṅụ oké temulawak adịghị mma n'ihi na afo . Ụfọdụ ndị mmadụ na- nso na -erepịaghị temulawak ndị na-ata ahụhụ si na -arịa ọrịa shuga , na ọgwụ ọjọọ na-ewe obatanan na ime ndị inyom. E wezụga temulawak , ị nwekwara ike gbalịa dragọn ahụ mkpụrụ uru agaghị mpe irè nọgide na-enwe ahu ike. Nwere fun !